Yini ongayibuka namuhla ku-Netflix ongayisebenzisa kule Sonto ntambama? | Izindaba zamagajethi
Yini ongayibuka namuhla ku-Netflix ozoyisebenzisa kule Sonto ntambama?
UMiguel Hernandez | | Ama-movie nochungechunge, General, Izaziso
Kodwa yeka iSonto elinethayo ePeninsula! (futhi ngiyazi ukuthi amanye amanzi nawo awile eCanary Islands) Ngakho-ke sizobhekisisa iNetflix ukukunikeza okuqukethwe okuhle kakhulu ongakubuka namuhla. Futhi ukuthi i-Netflix inekhathalogi enkulu kangaka yochungechunge namabhayisikobho esingalahleka ukuphequlula injini yosesho lwayoYingakho sihlala sikunikeza isandla ngempelasonto, ukwenza kube lula kuwe ukuthola ama-movie amahle kakhulu ongawabuka ngokushesha kwi-Netflix futhi ngekhwalithi enhle, ngenxa yokubhaliswa kwayo kokuxazululwa kwe-Ultra HD.
Ngakho-ke, ake sibheke lezi zihloko ngakho konke ukuthanda esingakuthola kukhathalogi emnandi yenkampani yokuqukethwe kokulalelwayo nokubukwayo yaseNyakatho Melika. Futhi uma ungekho ku-Netflix, mhlawumbe lokhu kuhlanganiswa kuzokusiza ukhethe le sevisi.
3 Olunye Uhlangothi Lombhede
4 Tape Yezocansi
5 UCinde we-Bygone Ages: Cleopatra (1962) noConan the Barbarian (1982)
Le filimu ekhiqizwe yiNetflix yakhishwa ngo-2017, okuyindaba esezingeni eliphezulu, ngoba sizithola singoNyanga kaFebhuwari kuphela. Sizohlangana noMaisie Williams, umlingisi omele u-Arya Stark ku Umdlalo Wamakhosi. Kule filimu eqanjiwe yesayensi sizothola ukugxekwa komphakathi ngendlela eLondon ebaphatha ngayo abantu bayo ngokuya ngesimo sabo. Vele, ngemuva kwengozi emangalisayo, umlingiswa oyinhloko uthola uchungechunge lwamandla amakhulu azowasebenzisela inzuzo yakhe ukuzitholela "ukuziphindisela" kwakhe.
Ifilimu ka-2014 eqoqe impikiswano enkulu, ikakhulukazi ngoba iNyakatho Korea izwakale ihlanjalazwa yiyo. USeth Rogen noJames Franco bachitha yonke i-movie behlekisa ngomholi wezwe lase-Asia. Ukuhlekisa okuncane ongasidlulisa kukho isikhathi, uma kungabonakali kuzo zonke izethameli. Sula imibono yezepolitiki ongayiphilisa ngayo ntambama, ngoba le nhlanganisela yabalingisi ivame ukudala indawo yokuhlekisa enesihluku.
Olunye Uhlangothi Lombhede
Manje siyashisa esandleni sikaPaz Vega. Ukuhlanganiswa okwehlukile phakathi komculo, uthando, ucansi olucacile nezindaba zothando ezifana namafilimu aseSpain. Isimo esavela eSpain futhi sahambisana Izinsuku zebhola, Futhi, uma uthanda i-movie, sikukhumbuza ukuthi inengxenye yesibili etholakala nakuNetflix futhi enesihloko esithi Zombili izinhlangothi zombhede. Inketho enhle yokuchitha intambama njengezithandani.
Siyaqhubeka namahlaya, ifilimu elingisa uCameron Díaz noJason Segel (umlingisi we-How I Meet Your Mother), lapho bobabili, banamathele enkambisweni yomshado, banquma ukuhlobisa izinto ngokuqopha ibhayisikobho ebekela obala ezocansi. Inkinga iza lapho beqala ukubona ukuthi i-movie ilayishwe efwini labo le-iCloud futhi kamuva kwi-portal yokuqukethwe okuvusa inkanuko, ngakho-ke sekuyisikhathi sokubona ukuthi bakwazi kanjani ukuvimbela umbuthano wabo osondele kakhulu ekubaboneni benesikhathi esimnandi.
UCinde we-Bygone Ages: Cleopatra (1962) noConan the Barbarian (1982)
Ekugcineni sizovala ngama-Classics amabili atholakala ku-Netflix, siqala ngawo Cleopatra, i-blockbuster yomlando enokuqukethwe okuphezulu lokho kungezwe kukhathalogi yeNetflix futhi lokho kuzojabulisa abadala bendlu, ngoba banelungelo futhi lokusebenzisa iNetflix, empeleni, uma befunda ukuyisebenzisa kahle ingaba umlingani ophelele wokuzijabulisa kwabo.
Kungashiwo okuningi noma okuncane okufanayo Conan owezizwe, i-movie ebonakala ingaphumi esitayeleni nalapho U-Arnold Schwarzenegger (bekufanele ngibheke ukuthi ibhalwe kanjani) udlala indima emangalisayo lokho kwamfaka ekudumeni okumfanele. Futhi kubhalwe ukuthi kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokwenza umsebenzi owakhiwe ngaphambili, nokuthi kusukela namhlanje ungajabulela ngqo kwiNetflix. Ungaphuthelwa ama-premieres esikutshele wona namuhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Yini ongayibuka namuhla ku-Netflix ozoyisebenzisa kule Sonto ntambama?
Imidlalo yevidiyo ebonakalayo izoba nokuthengisa kwangaphambilini njengakidijithali
Ungayikhipha kanjani imvelo Windows 10 izinhlelo zokusebenza